gvSIG badal ahaan degmooyinka - Geofumadas
gvSIG sida badiil ah degmooyinka
Maarso, 2009 Geospatial - GIS, GvSIG
Toddobaadkan waxaan yeelan doonaa kulan farsamo oo ah mashruuc oo ka fekeraya gvSIG si uu uga shaqeeyo degmooyinka halkaas oo ay fulinayaan mashruuc Sharci-dhuleed ah oo daboolaya qayb ka mid ah Bartamaha Ameerika.
Horeba Latin America khibrado kala duwan ayaa laga maqlay isticmaalka gvSIG, kiiskan waxaan rabaa inaan sheego mid ka mid ah kuwii ka dhacay Guatemala, oo laga yaabo inuu yahay kii ugu horreeyay ee ka dhaca gobolka Bartamaha Ameerika.
Habaynta khibradaha waa inay noqotaa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee gvSIG ay uga faa'iideysan karto faafinta iyo kor u qaadista aaladdaas maxaa yeelay maahan degmo kasta oo bilaash ku qaadan doonta. Waxaa jira kharash kaliya fulintiisa laakiin sidoo kale sii jiritaan ahaan sababo la xiriira daciifnimo badan oo ka jirta macnaha Latin Amerika, taas oo ku kala duwan waddan ahaan laakiin guud ahaan u dhexeeya inta u dhaxeysa xaddidaadaha dhaqaale ee dawladaha hoose iyo xasilloonida la'aanta shaqaalaha bani'aadamka sababo la xiriira adeegsiga siyaasadaha oo xadidan. shaqooyinka dadweynaha. Waxay u muuqataa in iskaashiga caalamiga ah uu door muhiim ah ka ciyaari karo tan, horay ayaan u iri dukumintigaas, taas oo hadda u muuqata inaan la heli karin.
Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu qiimaha badan ee waayo-aragnimadan ka jirta Sacatepéquez ay tahay abuuritaanka aalado waxtar u yeelan kara, midkoodna ku celcelin ama horumarin. Soo bandhigid uu sameeyay Fabián Rodrigo Camargo 3as waxaa lagu dhajiyay websaydhka gvSIG, mid duug ah laakiin hadda ku jira boosaska ay hayaan. Shirka GvSIG bishii Noofambar 2007 kaas oo ka tarjumaya natiijooyinka laga helay mashruucan Guatemala.
Intaa waxaa dheer, laga soo bilaabo waayo aragnimadan, Camargo ayaa bulshada ku soo celiyay bandhig aad ufiican oo lagu baranayo koorsada gvSIG, taas oo noqon karta mid si fiican ugu wanaagsan buuga marka barista koorsada, Waxaan u isticmaalay. Khariidadaha iyo xogta lagama maarmaanka u ah fulinta jimicsiga ayaa sidoo kale lagu daray.
Mashruucan waxaa taageeray Sanduuqa Andalusia ee Dawladaha Hoose ee Wadajirka Caalamiga ah, iyo Ururka Dawladaha Hoose ee Sacatepéquez, Guatemala. Xaqiiqdii waxay ahayd mid waxtar leh, hadaanay ahayn mid casri ah, waxa Moisés Poyatos ku sameeyay, qiyaastii 100 degmo, had iyo jeer Guatemala, mashruuca Dawladaha Hoose ee Dimuqraadiga oo aan rajaynayo inaan ka hadlo waqti kale.
Waa nidaaminta habraacyada ama khibradaha sii dheereyn kara nolosha dadaaladii la sameeyay, soo koobitaanka lagu muujiyay habka loo adeegsaday waa mid aad u macquul ah, in kasta oo ay tahay inay sidoo kale ahaato mid dhib badan, maaddaama waxyaabo badan laga soo dhexsaaray wixii gvSIG 1.1 uu ahaa illaa hadda. Tusaale ahaan, habeysii Nidaamka Tixraaca, waxaa suurtagal ah laga bilaabo 1.3 iyo xaaladda Guatemala, waxay leedahay SRS u gaar ah, in kastoo 1.9 qaar ayaa weli la jebiyey liisaska sababtoo ah sida muuqata in xogta ra'yiga ee ra'yiga aysan ku xirnayn.
Hirgelinta softiweer bilaash ah oo ku saabsan maareynta dadweynaha ee dalalka soo koraya ayaa ka dhigan waxqabad hawlgal iyo dhaqaale.
Waxay u ogolaataa inay yareyso "farsamada farsamada", oo ay weheliso waxyaabo kale oo saameynaya horumarka.
Fabián Camargo - La-taliyaha GIS
Waxaan soo koobayaa gabagabadii, oo iigu muuqda inaan ahay mid sax ah oo maanta ansax ah ... oo yaqaana dhawr sano.
Hirgelinta GIS ee dalalka soo koraya waa baahidiisa gaarka ah iyo dalab joogto ah oo ka yimaada ururada iskaashiga horumarinta caalamiga ah
Jiritaanka GIS ee degmooyinku wuxuu soo jiitaa cilmi-baarayaasha wuxuuna siiyaa faa'iidooyin shirkadda gaarka loo leeyahay ee fulisa howlaha guud.
Tababarku waa lama huraan kahor iyo inta lagu gudajiro mashaariicda fulinta GIS
Barnaamijka bilaashka ah wuxuu badbaadiyaa xaddiga dhaqaale ee helitaanka liisamada
Bulshada isticmaala, liisaska boostada, iwm waxay matalaan taageerada ay ururadu raadinayaan markay fulinayaan softiweer bilaash ah
In kasta oo GIS ee dalalkan ay da 'yar yihiin, bilowga hore waa inay ka fikiraan habka kaabayaasha xogta (SDI)
Jiritaanka xogta qaabab kale waa mid qiimo leh, inkasta oo tayada liidashada tayada sawirku ay aad u qanacsan tahay macluumaadka tixraaca.
Maalmihii la qaban lahaa Sebtembar sannadkan Argentina waa natiijada natiijooyinka ee Latin America, kuwaas oo ku xiran dadaal sida Venezuela laakiin waxaa suuragal ah in sanadkan mid ka mid ah soo jeedinta dhacdada ay noqon doonto abuuritaanka dhacdooyin ka dhaca meelaha kale ee qaaradda halkaasoo ay hore u jireen iniinyo ay kuwo kale ka tageen. In kasta oo ay jireen shirar (rasmi ah ama aan rasmi ahayn), shir ka dhacay Guatemala oo ay weheliso badhtamaha Ameerika, Kariibiyaanka iyo Meksiko 2010 waxba ma yeeli doono.
Halkaan waxaan kuugu sheegayaa dadaalka ah in nimankani ay sameyn doonaan, in sababta oo ah waxaan ogahay waxyaabo badan oo ku saabsan ku-saleyntooda iyo kartida aan ogahay in ay awood u leeyihiin inay kaalin weyn ka qaataan gvSIG. Halkan waxaad ka heli kartaa si loo yareeyo bandhigga Camargo.
Post Previous" Hore Gajes-ka tarjumaadda Geosmoke
Post Next Magacyada mashruuca AutoCAD 2010Next »
4 Jawaabo "gvSIG oo badal u noqonaysa degmooyinka"
Waxaan u maleynayay in ay dhexdhexaad ka tahay faallooyinka, laakiin nin, maalmahaas waa inaad ku heshaa niyadda wanaagsan xitaa qoraalka.
Qiimeeyaha iyaga ayaa sigaar cabba ama qe waxa ay u muuqataa in dadku ku badan yihiin
Waad ku mahadsan tahay xogta Alvaro, maanta waxaan wadahadal la yeeshay Moisés, oo waxay la jiraan mashruuc ay taageerayaan Midowga Yurub kaas oo ay kaga fulin doonaan gvSIG ugu yaraan degmooyinka 8 ee waqooyiga Honduras. Haatan waxay ku shaqeeyaan naqshadeynta.
4as Jornadas, ee 2008 ee la soo dhaafay, waxaa jiray soo bandhigid kale oo ku saabsan mashruuca "Degmooyinka Dimuqraadiga ah" ee Guatemala, oo ay bixiyeen Walter Girón iyo Moisés Poyatos.
Waxaad kala tashan kartaa bandhigga iyo maqaal ku saabsan:
gvSIG wuxuu bilaabay inuu noqdo tixraac dhab ah Latin America, khibrado aad uwanaagsanna kahelay dalal ay kamid yihiin Venezuela, Guatemala, Argentina, Brazil, Colombia ... aan rajeyno in Shirka XNUMXaad ee gvSIG ee Latin America, oo sanadkaan laga abaabulo Argentina, uu noqon doono goob kulan oo dhammaantood ah iyo bilaabista beel Latin Amerika ah oo awood badan.
Sidee ayuu u shaqeeyaa qalabka 'LiDAR scanner' ee 'iPhone 12 Pro'?
Dhamaadka ArcMap Waad ku mahadsan tahay wax walba!
Dayax gacmeedka GOES vs POES